20 Daneeyayaasha Eswatini waxay u soo bandhigeen liistada Rabitaanka Wasiirada SADC xal nabadeed
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Eswatini » 20 Daneeyayaasha Eswatini waxay u soo bandhigeen liistada Rabitaanka Wasiirada SADC xal nabadeed
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Eswatini • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Rabshado rabshado wata oo dad badan ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Eswatini ayaa sababay in Beesha Koonfurta Afrika ee Horumarinta (SADC) ay la kulanto Dowladda iyo 20 daneeyayaasha muhiimka ah ee xiisadda taagan si loo helo waddo loo maro .. Daneeyayaasha ayaa soo saaray bayaan iyo liis ay rabaan in loo soo bandhigo SADC.
Dadka iyo Dowladda Eswatini waxay diyaar u yihiin inay hadlaan
Koox ka kooban 20 daneeyayaal ballaaran oo ka tirsan Boqortooyada Eswatini ayaa soo saaray sidala socodsiinta Koonfurta Afrika ee Horumarinta Bulshada (SADC) ee ku taal Troika Organ Mission ee loo diro eSwatini.
Kooxda 20 waxaa ku jiray xisbiyo siyaasadeed, kaniisadda, shaqada, ganacsiga, kooxaha haweenka, dhalinyarada, ardayda, bulshada rayidka ah, iyo muwaadiniinta ay khusayso.
Kulankii Axadda ee July 4, 2021 wuxuu ahaa in lagu tixgeliyo qalalaasaha siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale ee xilligan ka jira Boqortooyada Eswatini iyo macnaha guud ee ujeeddada SADC Organ ee Siyaasadda, Difaaca iyo Amniga (TROIKA).
Halka Ciidanka ay la wareegeen Eswatini giyadoo la ilaalinayo xasiloonida kadib mudaharaadyadii nabada ahaa oo rabshado la galay muqaawamada ku labisan dareeska been abuurka ah, iyo dambiilayaasha oo dhac u geysanaya meheradaha isla markaana dilaya milkiileyaasha dukaanada, koox ka kooban 20 daneeyayaal sharci ah oo ka tirsan bulshada Eswatini ayaa la kulmay wasiirro booqanaya Eswatini oo ka socda Beesha Koonfurta Afrika.
Bayaan la soo saaray ayaa lagu yiri:
Waxaan xusnay oo aqbalnay mabda 'ahaan howlgelinta Kooxda Wasiirada ee SADC waxaa qoray Gudoomiyaha SADC TROIKA, Dr. Mokgweetsi Masisi oo ka tirsan Jamhuuriyadda Botswana.
Waxaan jecelahay inaan farta ugu fiiqno wafuudda iyo beesha caalamka in qalalaasaha hada ka jira dalka, oo loo muujinayo kacdoon bulsho iyo mid dhaqaale oo horseeda rabshado iyo amni xumo ay ka dhasheen ismari waaga siyaasadeed ee soo jireenka ahaa. Dhibaatada salka ku haysaa waa sidaa darteed qaab siyaasadeed waxayna u baahan tahay xal siyaasadeed oo ka baxsan hamiga qaab dhismeedka dastuurka hadda jira ama qaab dhismeedka kale ee maxalliga ah. Qaab dhismeedyada jira waxay keenaysaa in aan waxtar lahayn isku day kasta oo lagu xalliyo qaab dastuuri ah maaddaama ay aad u xanniban yihiin oo aan la shaqeyn karin.
Baahida ugu weyn ee dadka iyo doorka siyaasadeed ee dalka ayaa ah walina ay tahay tii si buuxda loo siiyay awood qeybsi siyaasadeed oo ah ficilkii ugu dambeeyay ee dib loogu soo celiyo awooda shacabka sidii dhacday ka hor Abriil 12, 1973.
Sidaas awgeed waxaan ugu baaqeynaa wufuudda SADC inay ka dhaadhiciyaan mas'uuliyiinta iyo qaababka SADC baahida loo qabo fududeynta waxyaabaha soo socda si loo jabiyo ismariwaaga:
Wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay, oo dhexdhexaadin ah oo ay hogaamineyso SADC ayna hoosta ka xariiqayaan Midowga Afrika, Barwaaqa Sooranka, Qaramada Midoobay iyo ama hey'ad kale oo la mid ah oo ay isku afgaran karaan dhinacyada. Dhammaan dhinacyada ku hawlan geeddi-socodkan wadahadalka siyaasadeed waa inay miiska u yimaadaan sidii loo siman yahay, iyadoo aan cidina ku raaxeysaneyn sharci ka sarreeya.
Wadarta ka joojinta xisbiyada siyaasadeed waxay noqon doontaa shuruud muhiim u ah fududeynta jawi wanaagsan oo saldhig u ah geeddi-socodka wada-hadal loo dhan yahay. Dhamaadka tan, waxaa muhiim ah in Madaxa Dowlada uu soo saaro bayaan arintaan ku saabsan, cambaareynayo rabshadaha iyo cabsi galinta ka dhanka ah dadka u ololeeya dimuqraadiyada xisbiyada badan iyo in meesha laga saaro dhamaan caqabadaha kale ee hortaagan siyaasada badan sida in meesha laga saaro shuruudaha qaar ka mid ah hay'adaha ku hoos jira Cabudhinta Sharciga Argagixisada ee 2008 ee wax laga badalay (STA).
In la meel mariyo hay'ad ku-meel-gaadh ah oo kormeerta dawladda iyo dib-u-habeynta hay'adaha, sharciyada iyo geeddi-socodka u horseedaya doorashooyinka ugu horreeya ee dimuqraadi ah. Maamulka ku-meelgaarka ah waxaa laga soo qaadan doonaa barmaamijyo ay ku lug leeyihiin daneeyayaal badan oo matalaya kaniisadda ballaaran ee bulshada eSwatini ah, howsha ugu horreysa ee ay qaban doonaanna ay noqon doonto in la simo garoonka ciyaarta.
Dastuur dimoqraadi ah oo loo dhan yahay oo ku dhisan tiirarka soo socda:
Kala saaridda awoodaha
Hindise Sharciyeed Xuquuqda
Sinnaanta jinsiga iyo kaqeybgalka dhalinyarada
Qaab-dhismeedka maamul ee mustaqbalka oo ku saleysan hannaanka siyaasadeed ee xisbiyada badan halkaasoo xisbiyada siyaasaddu ay ku tartami karaan awoodda a xor ah, cadaalad ah oo lagu kalsoonaan karo doorasho qancisa heerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah. Xisbiyada siyaasadeed ee guuleysta waa inay dhisaan dowlad leh awood fulineed oo buuxda.
Waxaan aaminsanahay in tan kor ku xusan ay ka tarjumeyso rabitaanka dadka eSwatini sida lagu muujiyey aalado badan iyo codsiyada dhowaan loo gudbiyay xubnahooda baarlamaanka. Tani waxay damaanad qaadi doontaa nabadda iyo xasilloonida dalka ee muddada dheer waxayna u oggolaan doontaa muwaadiniinta inay hore u socdaan iyagoo si buuxda ugu raaxeysanaya xaqa aayo-ka-tashiga iyo xuquuqaha kale ee ku xusan baratakoolka caalamiga ah.
Waxaan mar labaad xaqiijineynaa baaqii hore ee ahaa in shaqaalaha oo dhan ay ka fogaadaan shaqada ilaa inta ciidanka oo dhan laga saarayo waddooyinka nabadgelyadana shaqaalaha loo damaanad qaadayo dowladda. Waxaan sidoo kale horay ugu soconaa Maalinta Qaranka ee Salaadda iyo baroor-diiqda dhammaan Xarumaha Tinkhundla ee 10ka Luulyo 2021.
Ururada iyo hay'adaha soo socda ayaa lagu matalay kulanka:
Aasaaska Caddaaladda Dhaqaalaha-Bulshada (FSEJ)
Xiriirka Bulshada Ganacsi ee eSwatini (FESBC)
Golaha Kaniisadaha Swaziland (CSC)
Shirweynaha Ururka Shaqaalaha ee Swaziland (TUCOSWA)
Ururka Kalkaaliyayaasha Dimuqraadiga ee Swaziland (SWADNU)
Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga Dadweynaha (PUDEMO)
Dhaqdhaqaaqa Xoreynta Dadka Swaziland (SPLM)
Halgamayaasha Xorriyadda Dhaqaalaha ee Swaziland (EFF-Swaziland)
Machadka Dimuqraadiyada iyo Hogaaminta (IDEAL)
Golaha Haweenka Reer Miyiga ee Swaziland (SRWA)
Dhaqdhaqaaqa Shaqo La'aanta Dadka Swaziland (SUPMO)
Jabhada Dimuqraadiga Swaziland (SUDF)
Ururka Shaqaalaha Qaranka ee Isbahaysiga Dadweynaha (NAPSAWU)
Midowga Ardayda Swaziland (SNUS)
Machadka Siyaasadda Kale ee Swaziland (SAPI)
Hogaamiyaasha Kaniisadaha ee Swaziland (SCCL)
Hal Bilyan oo Olole ah
Xiriirka Ururada Shaqaalaha Swaziland (FESWATU)
Oxfam Koonfur Afrika
Hindisaha Furan ee Koonfurta Afrika (OSISA).